बढेको तलब घटाउन पनि आन्दोलन ! – SamajKhabar.com
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: २५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०८:२६
क्यानडाको क्युबेक प्रान्तका डाक्टरहरुले आफूहरुको तलब बढाइएको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्। हालसम्ममा सो निवेदनमा ७८४ डाक्टरले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
‘हामी क्युबेकका डाक्टरहरु बलियो सार्वजनिक प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ र अहिले भएको तलब वृद्धिको विरोध गर्छौँ,’ सो निवेदनमा लेखिएको छ।
किन गरे त डाक्टरहरुले तलब वृद्धिको विरोध? गत फेब्रुअरीमा भएको सम्झौताअनुसार सो प्रान्तका २० हजार डाक्टरहरुको तलबमा सन् २०२३ सम्मका लागि वार्षिक १.४ देखि १.८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने भएको छ। यसको अर्थ २०२३ सम्ममा डाक्टरहरुका लागि थप १.२ अर्ब डलर खर्च हुनेछ।
क्यानडामा एक फिजिसियनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्षिक औषत २ लाख ६० हजार डलर तिर्नेगर्दछ। तर स्वास्थ्यमा सेवामा लागेका नर्स, कर्मचारी र बिरामीहरुको अवस्था उनीहरुको जत्तिको राम्रो छैन। पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा बिरामीलाई दिइएका विभिन्न सुविधा कटौती गरिएको छ भने नर्सहरुले जनशक्ति अभाव भएको भन्दै विभिन्न माग राखिरहेका छन्। त्यसैले ती डाक्टरले तलब वृद्धिको विरोध गरेका हुन्। उनीहरुले सो रकम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधार गर्न खर्चिनुपर्ने बताएका छन्।
सो प्रान्तका स्वास्थ्य मन्त्री गेटोन ब्यारेटले डाक्टरहरुले बढेको तलब लिन नचाहे त्यो रकम ‘टेबलमै छोडिदिए राम्रो हुने’ बताए। यद्यपि त्यस्ता डाक्टरहरुको संख्या निकै सानो रहेको उनले बताए। उनका अनुसार डाक्टरहरुको बहुमत संख्याले तलब वृद्धिको विपक्षमा मत नदिएसम्म मन्त्रालयले यसलाई रोक्न नसक्ने बताए।
यसरी आफ्नो बढेको तलब समेत रोक्न आन्दोलित भएपछि त्यहाँका डाक्टरहरुको विश्वभर प्रशंसा भएको छ। कतिपयले यसमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छन्। वाशिंगटन पोस्टले यसलाई ‘साँच्चैको क्यानेडेली’ संज्ञा दिएको छ। एजेन्सी
२५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०८:२६ मा प्रकाशित